Xariga Anthony COX iyo xurgufta u dhaxeysa DF Somalia iyo shirkada SKA? – Kismaayo24 News Agency
Xariga Anthony COX iyo xurgufta u dhaxeysa DF Somalia iyo shirkada SKA?
by Mohamed Abdirashid Abaajo 2nd February 2019 070
Dowlada UK ayaa dhowaan walaac ka muujisay xaalada ninka u dhashay dalkaasi Anthony Cox oo 19kii bishan lagu qabtay madaarka Muqdisho, isagoo la sheegay inuu sitay waxyaabaha qarxa oo uu doonayey inuu la raaco diyaarada Ethiopian Airlines.
Warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in boorsoonyinkiisa ninkan laga helay [sunta dadka ka ilmeysiisa], waxaana weli socda baaritaanka iyadoo maxkamada gobalka Banadir ay xukuntay in xabsiga lagu sii hayo ninkan inta uu baaritaanka socdo.
Cox oo horey uga soo tirsanaan jiray ciidamada Ingiriiska iyo waliba ciidamada Faransiiska ayaa ka tirsan kooxda Amniga u qaabilsan shirkada SKA ee fadhigeedu yahay Dubai, shaqadaasi oo uu ka tagay sida shirkadaasi sheegtay 5tii bishan Janaayo.
Hase yeeshee qaar kamid ah Asxaabta ay wada shaqeyn jireen COX oo warbaahinta UK soo xiganeyso ayaa xariga ninkan sheegay inuu jiro tuhun weyn ah inuu la xariiro xurgufta u dhaxeysa Shirkada SKA International Group iyo Wasaarada Gaashaandhiga Dowlada Federaalka oo horey u wada shaqeyn jiray, kuwaasi oo uu burburay wadashaqeyntooda bishii April ee sanadkii hore.
SKA ayaa Muqdisho ku leh xafiis lagu magacaabo Somali Risk Management (SRM) oo qaabilsan tababarada dhinaca ciidamada iyo sugida amniga, wuxuuna Mr.Cox kamid ahaa xafiiskaasi.
Wadashaqeynta SKA iyo dowlada Federaalka ayaa burburay xiligii ay jirtay xiisadii Doorashadii Guddoomiyaha Golaha Shacabka, bishii April ayey dowlada Soomaaliya sheegtay inay lacag badan oo laga keenay Imaaraatiga ku qabatay Madaarka Muqdisho, lacagtaasi oo ay sheegeen imaaraatigu in loo waday mushaharkii ay ku kabi jireen militariga Soomaaliya.
Saraakiisha UK u jooga Muqdisho oo booqday xabsiga lagu hayo Mr.Cox ayaa walaac ka muujiyey amnigiisa inta lagu hayo Xabsiga Dhexe ee Muqdisho oo ay sidoo kale ku xiran yiiin kooxo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al Shabaab iyo Daacish.
Taliska Asluubta ayaa iyagu todobaadkan beeniyey in dhaawac loo geystay Mr.Cox oo ay damceen inay dilaan koox ka tirsan Daacish oo kamid ah maxaabiista lagu hayo xabsiga, balse askarta ayaa la sheegay inay ka hortageen kooxdaasi dooneysay inay xabsiga ku dhex dilaan ninkaasi ajnabiga ah.
Cox ayaa hadda laga wareejiyey xabsiga dhexe, waxaana loo wareejiyey xabsi ku yaalla garoonka. Halkan ka aqri warkaas.
Dab xoogan oo Xalay ka kacay qeybo kamid ah Suuqa Bakaaraha gaar ahaan…
Qiso jaceyl oo dhex-martay wiil uu Imaam Somali ah dhalay iyo gabadha baadari
XOG:- Itoobiya oo Xidig Guddoomiye Barlamaan u soo Sharaxday, Shariif Xassan & Xassan Sheekhna Madaxweyne.
admin 6th January 2017 6th January 2017
Ergada Beesha Bagadi oo Cabasho ka Muujiyay in Kursiga Beeshaasi ay ku leedahay Aqalka Hoose ee K/galbeed Musuq maasuq lagu sameeyay+Sawirro
Akhriso: Madaxweyne farmaajo oo Jawaab cad siiyay qabiilada u hanqal taagaya in loo magacaabo xilka ra’isul wasaaraha